Moments leh saaxiibo 37
Afarta meelood iyo afar meelood wareega wareegga Masonic Keystone ee Royal Arch Cutubka waa waraaqaha HTWSSTKS Ma waxay leeyihiin xidhiidh kasta oo Zodiac ah, maxayse tahay jagooyinkooda ku wareegsan goobada?
Waraaqaha H. T. W. S. S. T. K. S. waxaa laga akhrisan karaa bidix illaa midig, laakiin waa inay sidoo kale ka soo leexiyaan dhanka midig. Sida aan ku ogaanno jilibka, waraaqda ugu horeysa ee H. waa meesha ay udhaxeyso, T. at the aquarius, W. xayiraad, Qeybta koowaad at kubbadda cagta, labaad labaad at libra, labaad T. at leo, K. kansarka, iyo Seddexaad at dhirta. Waraaqaha waxaa laga heli karaa buugaagta Masonic, laakiin ereyada ay ku qoran yihiin xarfahan, ama macnahooda, waxaa lagu siiyaa buug kasta. Sidaa daraadeed, waa in la fahamsiiyaa in muhiimada ay tahay qarsoodi iyo muhim ah oo aan loogu talagalin wax barista iyo iftiiminta kuwa aan soo qaadin shahaadada Royal Arch Cutubka. Qoraaga ma aha xubin ka mid ah dimoqraadiga Masaajidka, ma helin wax tilmaan ah mid ka mid ah Ducaale ah oo ku saabsan diinta masiixiga, oo aan iska dhigin aqoonta qarsoodiga ah ee Farshaxanka Masonic. Laakiin calaamadintu waa luqad caalami ah. Qof kasta oo fahmaa waa inuu akhristo macnaha istiraatiijiyada muhiimka ah ee iftiinka Masraxa, kaas oo ku jira jilibka, oo uu caddeeyay iftiinka uu matahay, iyo sida uu u yaqaana kan kii soo qaada. Afarta calaamadood ee zodiac, gemini, baashaalka, laf-dhabarka iyo bacaha, ayaa laga jaray sidii aan lagama maarmaanka u ahayn shaqada, ama haddii ay ku jiraan calaamadaha, taurus, leo, scorpio iyo aquarius. Taurus, leo scorpio iyo aquarius waxaa lagu calaamadeeyay xarfaha S. T., S. T., kuwaas oo la dhigo badhtamaha u dhexeeya calaamadaha udhaxeeya, kansarka, libra iyo xornimada. Haddii calaamadaha ama waraaqaha ka soo horjeeda midba midka kale ku xiran yahay xariiqyo, laba iskutallaab ayaa la sameyn doonaa. Iskutallaabku wuxuu abuuray xariiq toosan H. S. iyo laynka tooska ah ee K. W. waa iskutallaabta joogtada ah ee maskaxda, xuubka-libra iyo xajmiga furka. S. iyo T. T. waa iskutallaab dhaqaaq oo ah jilitaanka, oo ay sameeyeen calaamadaha toryuska-scorpio iyo leo-aquarius. Calaamadaha la guuray iyo iskutallaabta waxaa lagu gartaa afarta xayawaan ee xayawaanka ah: bull ama dibi, tufus, oo ku qoran warqadda S .; libaax, leo, taas oo ah warqadda T .; gorgortanka ama nalka dabka, meeshaas oo ah warqadda S .; ninka (mararka qaarkood malaa'igta) ama aquarius, meeshii taas oo ah warqadda T. Aragti ku saabsan xiriirka iyo jagooyinka xarfaha iyo calaamadaha labada isdhexgalka: Qoraalka H. iyo ka soo hor jeedda S., waxay u taagan tahay madaxa dhagxaanta iyo saldhigeeda, waxayna u dhigantaa isku-dhaca iyo libra. Waraaqaha K. iyo W. waxay u taagan yihiin labada dhinac ee keystone, taas oo u dhiganta calaamadaha-kansarka. Kani waa iskutallaabta joogtada ah ee maskaxda. Warqadda sare ee S. iyo warqadda hoose ee S. waxay ka dhigan tahay geeska sare iyo geeska ka soo horjeeda hoose ee muhiimstone iyo u dhiganta calaamadaha taurus-scorpio ee jilibka. Warqadda sare T. iyo warqadda hoose ee T. waxay u dhigantaa geeska kale ee sare iyo geeska ka soo horjeeda hoose ee keystone, iyo calaamadaha aquarius-leo of zodiac, taas oo ka dhigaysa iskutallaabta guuritaanka ee zodiac. Waraaqaha dhagaxyada muhiimka ah, ama calaamadaha zodiac, waxaa loo isticmaali karaa laba-labo siyaabo badan. Waxaa la ogaan doonaa waraaqaha madaxa iyo saldhigga iyo dhinacyada dhagxaanta keystone ay yihiin kuwo ka duwan iyo waraaqaha ka soo horjeeda (S. S. iyo T. T.) ee geesaha kaas oo u dhigma iskutallaab masaafo ah oo ah jilibka, oo lagu garto afarta xayawaan ee kor ku xusan, waa isku mid. Haddii waraaqaha dhagaxyada iyo xarumahooda, iyo calaamadaha zodigoodu waxay ahaayeen kaliya si ay u daboolaan maskaxda oo ay ku dhaleecaan dadka raali gelinta ah, waxay noqon lahaayeen kuwo yar oo la isticmaalo oo waa in la tuuraa. Hase yeeshee, waxay leeyihiin, dhab ahaantii, muhiimad qoto dheer leh, muuqaal ahaan iyo midka ruuxiga ah. Fikrado aan yareyn ayaa la siiyaa ragga kuwaasi oo ka dhigaya maadooyinkaas qiimaha wax ku oolka ah, oo ay u leeyihiin xaqiiq ahaan noloshooda.
Miyuu jimicsigu wuxuu u dhigmaa nin adduunka iyo caalamka oo dhan; dhagxaanta dhagaxu waa wakiil ka mid ah nin. Faahfaahin ku saabsan jagooyinka uu qofku ku jiro adduunka iyo beerista wanaagga oo uu ku guulaysto khiyaamooyinka jirdil u geystay, ka hor inta uusan kor u qaadin taajkii iyo ammaankiisa noloshiisa, waa mid aad u dheer inuu isku dayayo. Kaliya tusmada kooban ayaa halkan lagu bixin karaa. Sida nin jir ahaaneed lagu meeleeyo adduunka jireed ee maskaxda, sidaa darteed nin sida ruuxa ah ayaa loo dhigaa nin jir ahaaneed, jirkiisa jirkiisa. Maadaama uu yahay haweeney ka dhalatay haweenku waa in ay ka soo baxaan xaalad jireed oo hooseeya, ka shaqeeya dabeecadiisa xayawaanka, oo u kacaaya ammaanta dhalinyarada cilmiga ah ee adduunka, sidaa darteed nin sida ruuxa ah waa inuu hoos yimaadaa oo ka soo baxaa dabeecadiisa xayawaanka kaca oo buuxi ninkii caqli ahaan sida taajirka ruuxiga ah iyo ammaanta. Sida Ixion oo ka mid ahaa qoraallada Giriigga ayaa la xidhay oo iskutalaabay iskutallaabtiis, si ay u gutaan si khaldan, sidaasi darteed waa nin adduunyo ah oo lagu meeleeyo si uu uga shaqeeyo qadarkiisa; iyo, sidoo kale waa nin sida ruuxa ku jira jidhkiisa jidhkiisa si uu u maro tijaabooyinka dabiiciga ah, in la dulmiyo, illaa uu ka adkaado, dabeecada xayawaanka, ka dibna inoo dhex maro oo lagu nadiifiyo dhammaan noocyada baaritaanada iyo tijaabooyin, si uu u rakibo oo uu isu muujiyo inuu istaahilo inuu buuxiyo booskiisa saxda ah ee caalamka. Calaamadaha Zodiac waxay muujinayaan marxaladaha iyo sharciga iyada oo loo eegayo qofka jir ahaan iyo maskaxeed iyo ruuxi ah oo ka shaqeeya xoddooyinkooda, oo ku dhex jira jodiga oo dhan. Waraaqaha saaran dhagxaanta waa inay muujiyaan habka iyo habka qofka uu ruux ahaan u shaqeeyo jidhka jidhkiisa ee ku yaala meel uu ku yaal, si uu u noqdo mid muhiim ah oo dhammaystiraya dabeecadda boqornimada. Shaqada Royal Crown Cut wuxuu ku siin karaa calaamadaha xarfaha iyo dhagaxyada muhiimka ah; laakiin waxay noqon kartaa oo kaliya calaamadda. Nin sida ruuxa ah ayaa dhisi kara qaansiirkiisa, laakiin isagu ma dhamaystirayo-run ahaantii ma buuxiyo hal nolol. Wuu ka adkaaday; waa la dilay by cadaawayaashiisa. Marar badan markuu geeriyoodo waa la soo sara kiciyaa, mar labaadna wuu imanayaa, wuuna sii wadi doonaa shaqadiisa ilaa uu ka sara kaco oo uu buuxiyo booskiisa oo uu buuxiyo qaansigiisa macbudka. Wareegga noloshiisa, keynta, waa la buuxin doonaa. Mar dambe ma bixi doono.
Mason oo dhan ee Mason oo qaada "Royal Arch Chapter" waa mid calaamad u ah markii uu u qalmo oo diyaar u ah inuu buuxiyo oo buuxiyo qulqulka noloshiisa-macbudka aan la dhisay gacmo. Man sida Mason, dhagax weyn oo macbudka ah, ayaa hadda ku taal qaybta ugu hooseysa ee dhismaha. Isaga, waa, meesha uu joogo jinsiga, libra, ee uu ku dhashay. Waa inuu kacaa, waa inuu isa saaro. Kadib qaadashada jagooyinka ay ku qoran yihiin xarfaha dhagxaanta, ama calaamadaha boosaska, iyo in shaqada loo baahan yahay warqad kasta ama calaamad kasta, waa inuu kordho qiimo u gaar ah oo u shaqeeya madaxa - taas oo ah taajka iyo sharafta nin. Oo goortuu dhagax la qoray ka furo isagoo aan madaxay gooysay, de markaas waa la oggolaan doonaa inuu wiilkiisa gooyo. Wuxuu markaa noqon doonaa dhammaan wixii la yiri ee Stone Stone kaas oo ah magac cusub, magaciisa cusub, kaas oo isaga qudhiisu ka dhigayo calaamadiisa dhagaxan, dhagaxa ah ee aan dhimanayn.